Musuq-Maasuq Maamuleed | KEYDMEDIA ONLINE
Maanta dal iyo dadba waxaan la hitinaynaa wax aan gacmaheenna ku falkinno gabal dhacay iyo waabari kasta. Labo is kuma haysato in musuqu naafeeyay dhinac kasta oo ka mid ah dawladda iyo bulshadeenna Soomaaliyeed.
Haddaba, Musuq-maasuq ayaan hadii aan warbaahin nahay marwalba ka hadalnaa oo aan farta ku fiiqnaa, bal waxaan is ku dayaa in aan ku soo bandhiggo qormadaan qaababka looga hortagi karo musuqmaamsuqa, aniga oo kaashanaya dhiganayaal Cilmiyeed fara badan oo laga qoray mawduucaan.
Waxaa lagama maarmaan ah in aan ku dhaqaaqno tillaabooyinka soo socoda, waa haddii ey naga go’antahay in aan cirib tirno musuqa, xididdadana u siibo, inta uusan noogu faafin sida dab xaabo la qabadsiiyay.
2. Is- weydiin joogta ah
4. Baraarug bulsho
Si loo helo talis qumman iyo maamul xalaal miirad ah, loona kobciyo garadka qofka u shaqeeya dawladda, waxaa lama huraan ah in la helo dhaqan iyo baraarujin ku saabsan xumaanta uu leeyahay musuqmaasuqu, arrintaasi waaxay laf dhabar u taahy qodobbada aan kor ku soo xusnay, waxay soo kabi kartaa kalsoonida muwaadiniinta ee burburtay, waxay horseeddi kartaa in uu soo af-jarmo musuqa iyo sed-bursiga buux dhaafiyay meel waliba.
Haddii ey ahaan lahayd xafiisyada sida gaarka ah loo leeyahay iyo kuwa guud, hay’addaha xukuumadda ama kuwa kale, ee aan dawliga ahayn, balse ey kala dhaxayso wada shaqayn toos ah dawladda.
5. Nidaam Dimuqoraadiya
6. Hirgalinta Qawaaniinta
7. Anshax Guud